Homwe dzeParamende Dzabooka Zvakanyanya
WASHINGTON — Kusamira zvakanaka kwezvinhu muhurumende munyaya dzeupfumi kunonzi kwave kutadzisa kufamba zvakanaka kwemabasa ematare eparamende neseneti, izvo zvinonzi zviri kuomeserawo nhengo dzeparamende.
Nechipiri chesvondo rino dare reparamende rinonzi rakangosangana kamwe chete ukuwo reseneti richikwanisa kugara kaviri, gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vasati vazivisa kuti paramende ichambomira kusangana kusvika musi wa 15 Mbudzi.
Vadare vakawanda vanobva kunze kweHarare vanonziwo vari kurambwa mumahotera sezvo paramende iine chikwereti chinodarika mazana matanhatu ezviuru zvemadhora, izvo zviri kuzoita kuti vashaye pekurara.
Vadare ava vanonziwo vari kukundikana kuwana mafuta ekufambisa uye vamwe vari kugunun’una kuti vari kupedzisira vapinza maoko muhomwe dzavo, sezvo pasina zviri kuitwa nehurumende panyaya iyi.
Izvi zviri kusimudza mibvunzo yekuti hurumende iri kurasika papi panyaya iyi sezvo mamwe mapazi ayo ari kufamba zvisina matambudziko.
Vamwe vanhu vari kupomera gurukota rezvemari, VaTendai Biti, mhosva yekunyima paramende mari, asi vamwewo vanoti hapana danho rinotorwa naVaBiti risina kuzeyiwa nedare remakurukota.
Mukokeri wenhengo dzeMDC T muparamende, VaInnocent Gonese, vaudza Studio 7 kuti paramende haisi kukosheswa sezvo isiri kuremekedzwa sezviri kuitwa bandiko rehutongi pamwe neremitemo, ayo ari kuwana mari dzekuita zvose zvaanoda kuita.
Nhengo yeGoromonzi North vari veZanu PF, VaPaddington Zhanda, vanotiwo vanofunga kuti ivo vadare havanawo zvavari kuita mukuita kuti vazvigadzirisire dambudziko iri.
Hurukuro naVaInnocent Gonese pamwe naVaPaddington Zhanda